Kedụ ka ụlọ ọrụ cannabis si azụ ahịa ebuka?
Kedu ka ụlọ ọrụ cannabis si ere ahịa ọrịre?
Thomas Howard, onye na-ere azụmaahịa mbụ na onye ọka iwu cannabis ugbu a na-akọwa.
Kpakpando Egwuregwu na-apụta, nke naanị 2% nke ndị ọka iwu niile na-enweta. Practme akwụkwọ ịgba akwụkwọ na itinye uche na azụmahịa azụta.
Kwa ụbọchị, ana m aza otu ajụjụ efu gbasara nsogbu gbasara iwu.
Jụọ nke gị taa.
Companieslọ ọrụ Marijuana na-aga Canada na ụzọ ha na US Market.
Iso Tom Howard rụọ ọrụ dị ukwuu. O nyeere anyị aka ịgagharị maka nkwekọrịta ụlọ ala na ụlọ, ma nwee nghọta dị ukwuu ma na-enye aka!
Nnọọ mmụọ na Onye Ọzụzụ Iwu na Illinois
kpọọ ugbu a
Email Ugbu a
Mba, ekele m, onyinye a anaghị m achọ.
Mpempe akwụkwọ ntanetị mkpụrụ ego Cannabis
Nchịkọta Vidiyo Iwu Cannabis
1. Onye ọka iwu cannabis na Illinois & onye mbụ na-ere ahịa Tom Howard na-akọwa na ụlọ ọrụ cannabis na-eji ụlọ ọrụ Toronto Stock Exchange (TSE) na-agafe gburugburu Iwu Njikwa (CSA) ma depụta oke ahịa wii wii na mgbanwe US ​​dịka Nasdaq - dịka ọmụmaatụ Tilray ( Daq: TLRY)
2. Iji kpuchido azụmaahịa cannabis, biko nyochaa kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị taa - tel: (309) - 699-4691: Azụmahịa Cannabis na-eche ọtụtụ ihe ndị a na-ejighị n'aka na ịbanye na isi ahịa bụ nnukwu nke ha.
3. CSA na - eme ka o sie ike - ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume - maka ụlọ ọrụ cannabis nke America ịdepụta na ahịa ngwaahịa n'ihi oke nke mpụ gọọmentị etiti na-ebili n'oge nhazi wii wii nke m.
4. Canada nwere mkpụrụ ọka iwu kemgbe October 17, 2018, yabụ ụlọ ọrụ dị ka Aurora Cannabis wee dee ndepụta ya na TSE wee depụta na Nasdaq.
5. Gọọmentị Trump emeghị ihe ọ bụla iji kwụsị azụmahịa nke ebuka cannabis dị ka Tilary, ma ọ bụ Aurora, mana site na mkpochapụ Jeff S fadhi - anyị nwere ike ịkọ nkọ ma ọ bụrụ na Ngalaba nke Ikpe Ziri Ezi ma ọ bụ ihe nzuzo na Exchange Commission ga-eme ihe iji belata ego. azụmaahịa azụmaahịa.
6. TSE ekweghị ka edepụta aha ụlọ ọrụ cannabis na-ejikwa akụ ndị United States n'ihi na ọ na-emebi CSA n'okpuru iwu US, mana ọtụtụ ndị ọrụ na oghere cannabis na-ekewa ụlọ ọrụ ha iji nye ohere maka ndepụta abụọ.
Ndekọ abụọ nke ngwaahịa mkpụrụ osisi cannabis na-eme ka ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na United States na Canada nọrọ n'ahịa ahụ tupu MAKA United States tụpụrụ Cannabis na CSA ma ọ bụrụ na ụgwọ dị ka nke Chuck Schumer gosipụtara na Senate. Ya mere lezienụ anya.
8. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ maka onye ọka iwu Cannabis, kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị taa maka enyemaka iji dozie ya na ndị ọka iwu azụmahịa azụmahịa dị mgbagwoju anya.
Njikọ Ahịa Cannabis Ndị Ọzọ
Nke a bụ ederede Forbes zuru ezu na-akọwa otú ụlọ ọrụ ndị America si eji ngosipụta Canada ha depụta ngwaahịa ha na mba abụọ ahụ iji kwadebe maka iwu akwadoro:
N'ọnọdụ a, ụlọ ọrụ metụtara wii wii na-erute n'ezie na nnukwu ETF abụọ, ndị Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (OTC: HMLSF) (TSE: HMMJ) na ETF ọzọ ETFMG (NYSE: MJ) ịzụ ahịa na mgbanwe ahịa isi na azụmahịa na azụmaahịa dị ka ahịhịa Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) na teknụzụ sitere na cannabinoid GW Pharmaceuticals PLC- ADR (NASDAQ: GWPH) edepụtara na Nasdaq, na Ọganihu Na-akpata Ọkụ ahia na NYSE.
Exceprt sitere na ederede Bezinga zuru oke banyere usoro iji sonye na azụmaahịa azụmaahịa - dị ka ịdọ aka ná ntị sitere n'aka onye na-ere ahịa mbụ - OTC ebuka abụghị mmiri mmiri ma nwee nsogbu azụmahịa na ntinye na ọpụpụ - a dọrọ gị aka ná ntị mana maka ihe ndị ọzọ… gụọ ya. niile ebe a:
Ngukota na Legalization
Nke abụọ (s)